बिहे गरेको ७० वर्ष भयो,... :: अमृता लम्साल :: Setopati
सोमबार, फागुन १२, २०७६
बिहे गरेको ७० वर्ष भयो, श्रीमानको नाम अझै भन्दिनन्
अमृता लम्साल काठमाडौं, असार ९
शान्ता वैद्य। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
शान्ता वैद्य ८४ वर्ष भइन्।
उनी वटुटोल, सौलबहालमा १९९२ माघमा जन्मिएकी हुन्। आमा माणिकलक्ष्मी र बुबा कृष्णगोपाल सालिकेकी छोरी शान्ताको १२ वर्षमा बिहे भयो। उनका श्रीमान १९ वर्ष थिए।
बिहे गरेको सात दशक काटिसक्दा पनि शान्ता आफ्ना श्रीमानको नाम भन्न मान्दिनन्।
'बूढाको नाम भन्दैन के। भन्न हुन्न भन्थे पहिले। त्यही भएर अहिलेसम्म भनेको छैन,' कारण खुलाउँदै शान्ताले भनिन्।
के हुन्छ भन्यो भने?
'कुन्नि, त्यो त कसैलाई सोधेको छैन। गर्न नहुने भनेको काम किन गर्ने,' शान्ता अडिग रहिन्।
नजिकै बसेर सुनिरहेकी उनकी कान्छी छोरीले आमालाई सहज बनाइदिँदै भनिन्, 'बाको नाम विद्यानन्द वैद्य।'
शान्ता छोरीको घर धापाखेलमा थिइन्। श्रीमान विद्यानन्द पनि सँगै थिए।
श्रीमानलाई शान्ताले बोलाउन परे के भन्थिन् होला त? छोराछोरीको नाम जोडेर, फलानाका बा। नजिकै हुँदा त झनै सजिलो रहेछ। अगाडि गएर बोलाउने।
'अहिले जस्तो हो र पहिले! सासूससुरा र मान्ने मान्छेका अगाडि बूढाको नाम त के, सिधा मुख हेर्न पनि पाइँदैन। कुरा गर्न त परको कुरा। बोल्यो भने 'नकचरी, लाज हुँदैन' भन्थे,' शान्ता 'त्यो जमाना'मा पुगिन्।
शान्ता वैद्य आफ्ना श्रीमान् विद्यानन्दको ९१ वर्षको जन्मदिनमा। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
उनले आफ्ना श्रीमानकी फुपूकी छोरीको 'कथा' सुनाइन्। ती फुपूकी छोरीको बिहे भएको महिना दिनसम्म उनका श्रीमानले अनुहार देखेका थिएनन् रे। यसरी पनि चल्थ्यो।
'पछि अनुहार देख्दा त सितारा रहेछ, त्यही भएर नदेखाएको रैछ,' उनले सुनाइन्।
'मुखमा छ्याकी छ्याकी परेको के,' उनले बुझाइन्।
आफ्ना श्रीमानको अनुहार देखेको पल भने उनलाई याद छैन। अरूका अगाडि त बोल्न सक्दैन थिए, कोठामा आफूहरू मात्र हुँदासमेत धेरै कुराकानी नहुने उनले बताइन्।
'श्रीमान खासै बोल्नुहुन्न। चाहिने चाहिने मात्र बोल्ने हो। त्यही भएर खास धेरै कुरै हुन्थेन,' उनले भनिन्।
शान्ताका बुबा कृष्णगोपाल परराष्ट्रमा मीर सुब्बासम्म भएका थिए भने भाइ श्रीकृष्णले पनि परराष्ट्रमा जागिर खाइवरी अवकाश पाए। पढेलेखेको परिवारमा पनि शान्ताले भने पढ्न पाइनन्।
उनको काम भाइबहिनीको हेरचाह गर्नु, खेल्नु, अलिअलि काम गर्नु थियो। त्यत्तिकैमा एक दिन धेरै मान्छेहरू आए र उनको बिहे पक्का गरेको उनी बताउँछिन्।
नेवार समुदायमा बिहे छिनेपछि केटाको घरबाट केटीको घरमा 'लम्पिचा' लगिने चलन रहेछ। 'लम्पिचा' भनेको चाँदीको डब्बा, जसमा सुपारी, सिन्दुर बट्टा 'सिन्हमू', लाखामरी र फलफूल हुने गरेको शान्ताले सुनाइन्।
शान्ताका अनुसार उनका मामा, दाजुहरूले पनि त्यो बेलाको चलनअनुसार सुपारी र ३२ वटा ठूल्ठूला लाखामरी ल्याएका थिए।
'बिहेमा सुपारी नभई हुँदैन। दुलहीलाई नातेदारसँग चिनाउँदा नाताअनुसार सुपारी दिएर हिना (ढोग) गर्न लगाउँछ,' उनले भनिन्। स्वयंवरमै पनि दुलाहाले दुलहीलाई सुपारी दिनुपर्ने रहेछ। दुलहीले उक्त सुपारी फिर्ता गरेर हिँड्यो भने पारपाचुके गरेको समेत मानिने रहेछ।
अनि ३२ वटा लाखामरी नै किन?
'त्यो त थाहा छैन। तर, आफ्ना मावली र नजिककाहरूलाई सिंगै एउटा दिइन्थ्यो। अलि टाढाका नातालाई आधा र अझै परकालाई चौथाइ दिइन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'बिहेमा आउनेहरूले पनि त्यही लाखामरीको आकार हेरेर दाइजो दिन्थे, ठूलो बाटा, सानो बाटा गर्दै।'
शान्ता वैद्य। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
शान्ता वैद्य र उनका श्रीमान कान्छा छोरा र नातिनीसँग। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
दुलहीको मुख हेरेर पैसा दिन चलन पहिल्यैदेखि थियो। यसरी मुख हेर्दा पनि निकै पैसा जम्मा हुने गरेको उनी बताउँछिन्।
परिवारले चाहिँ दाइजो कति दिनुपर्थ्यो?
'टन्नै नि। भातभान्साका भाँडाकुँडादेखि पिसाब फेर्ने कोपरासमेत दिनुपर्थ्यो। पहिला ट्वाइलेट हुन्थेन नि। अनि भर्खर बिहे गरेकी छोरी राति कहाँ जान्छ भनेर कोपरा पनि दिने चलन थियो। एउटा मान्छेलाई चाहिने सबै कुरा दिन्थे,' उनले सुनाइन्, 'आफ्नै मामाहरूले त गाई नै दिने चलन थियो। दूध-दही खान पावोस् भनेर होला। पछिपछि महँगी बढेर होला, बाख्रा दिन थाले।'
गाई पाल्ने ठाउँ हुन्थ्यो त?
'किन नहुनु। किलागल भनेकै गाई पाल्ने ठाउँ थियो नि। त्यहाँ सबैका घरमा गाई हुन्थे। तिनलाई टुँडिखेलमा लगाएर चराउँथ्यौं। अहिले पो टुँडिखेल इत्रो भयो। घरैघर भए। पहिले त विशाल थियो नि,' शान्ताले बिर्सेकी छैनन्।
उनको कुलघर देवपटन (गोलः) थियो, पछि बसाइँ सरेर किलागल पुगेका रहेछन्। टुँडिखेललाई उनीहरू 'चाक्ला सिम:' भन्ने रहेछन्। उनको सम्झनामा टुँडिखेलको बीचमा ठूलो रूख थियो। रूखको फेदमा बनेको चौतारोमा राजा र प्रधानमन्त्रीहरू भाषण गर्थे। सूचनाहरू सुनाउँथे। पछि त्यो रूख काटियो र त्यहाँ मञ्च बन्यो। यसलाई अचेल सैनिकमञ्च भनिन्छ।
टुँडिखेलको त्यो विशाल रूख कहिले काटियो, कहिले त्यहाँ मञ्च बन्यो? यी घटनाको साल शान्तालाई याद छैन। यसको पनि कारण रहेको उनी बताउँछिन्।
'त्यो बेला कुनै उमेरका केटी मान्छे एक्लै हिँड्न पाउँदैन थिए। बूढी मान्छेले समेत सानै बच्चाको भए पनि हात समातेर हिँड्नुपर्थ्यो। आफ्नो बूढासँग हिँड्न पनि नपाइने,' उनले भनिन्, 'अनि त बाहिर देख्नुसुन्नु कमै हुन्थ्यो। घर वा टोलमै बित्थ्यो जीवन।'
शान्तालाई टुँडिखेलको रूख काटेको साल थाहा नभए पनि आफ्नो 'यःमरी कोखा' गरेको याद ताजा छ। नेवार समुदायमा कसैको बाह्रौं जन्मदिनमा 'यःमरी कोखा' गरिन्छ। जन्मदिन भएको मान्छेलाई १२ वटा यःमरीको माला लगाइदिएर पूजा गरिन्छ। शान्ताको यो बेला बिहे भइसकेको थियो।
उनलाई गुफा राख्दाको क्षण पनि याद छ। उनी १४ वर्षकी रहिछन्। उनलाई रजस्वाला भएपछि मात्र गुफा राखिएको उनले बताइन्।
गुफा बस्दाका क्षण सम्झिँदै उनले भनिन्, 'कोठाभित्र बसेर खेलिन्थ्यो। साना बच्चा र अरू साथी आउँथे। छोरा मान्छेको मुख हेर्न पाइँदैन थियो। बाहिरफेर जान पनि नपाउने।'
शान्ता वैद्य दम्पती आफ्ना छोरा, छोरी र ज्वाइँहरूसँग। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
शान्ता वैद्य तेस्रो जंकूका बेला श्रीमान, तीन छोरा र दुई छोरीसँग। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
अनि श्रीमानलाई हेरूँ हेरूँ भएन त?
'भएन के,' उनले मुस्काउँदै जवाफ दिइन्।
शान्ताका श्रीमान विद्यानन्द सिंहदरबारका कविराज वैद्य थिए। घर आर्थिक रुपले सम्पन्न भएकाले घरव्यवहार कष्टकर थिएन। तै घरायसी कामको भार शान्तामाथि छँदै थियो।
उनीहरू सबेरै किलागलबाट नरदेवीसम्म पानी लिन जान्थे। घन्टौं पालो कुरेर तीन-चार गाग्री ओसार्नुपर्थ्यो। नरदेवीको धारालाई उनीहरू 'कलधारा' भन्ने रहेछन्। नरदेवीदेखि ल्याएको पानीले किलागल चोकमा बसेर नुहाउने, लुगा धुने चलन रहेछ।
'अहिले भान्छामा धारा देख्दा अचम्मै लाग्छ। त्यो बेला पानी बोक्दा-बोक्दा ढाड दुख्यो भन्न पनि नपाइने। अहिले ढाडमा पेटी लगाउनु परेको छ,' उनी सुनाउँछिन्।
आफ्नै अगाडि देखेका परिवर्तनले शान्तालाई अचम्म बनाउँछ। मान्छेका सम्बन्धहरूमा हुने व्यवहार पनि फरक भएको उनी सुनाउँछिन्।
'पहिले सासूहरूको गोडामा बुहारीले बिहान-बेलुका तेल दलिदिएर सुताउनुपर्थ्यो। अचेल बुहारीलाई लगाउनुपर्छ हैन? बुहारीहरू अफिस जान्छ। थकाइ लागेर आउँछ नि,' उनले सुनाइन्।
शान्ता वैद्य दम्पती पहिलो जंकू बेला। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
'छैन। कुरा गरेको नि, यसो हँसाउने,' उनले हाँस्दै भनिन्, 'टिभीमा र कथामा यस्तै भन्थ्यो अनि।'
अनि कथा चाहिँ कुन?
'त्यही क्या‍ पुराण भन्ने बाहुनहरूले। हाम्रो टोलमा कथा भनेको बेला 'पहिले सासूलाई तेल, अब बुहारीलाई' भन्दै बाहुनले हँसाएको,' उनले भनिन्।
सासूहरूलाई तेल लगाउने र जुम्रा हेरिदिने काम पनि रित पुर्‍याएर गर्नुपर्ने रहेछ।
शान्ता भन्छिन्, 'पहिले जुम्रा हेर्ने। अनि तेल लगाउने र ढोग्ने। आजभोलि जुम्रै हुँदैन। तेल पनि लाउँदैन।'
शान्ताले थुप्रै परिवर्तन देखे पनि त्यसले उनको पहिरन र मान्यतालाई छोएको छैन। उनले बीस वर्ष उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माएकी थिइन्। तीन छोरा नित्यानन्द, उज्जवलानन्द र पञ्चानन्द वैद्य र दुई छोरी रमिता राजभण्डारी र जुनु वैद्य रघुवंशी छन्।
जेठा छोरा अमेरिकामा, ठूली छोरी लन्डनमा र बाँकी सन्तान काठमाडौंमै छन्। किलागलको मूलघर २०७२ को भुइँचालोमा भत्केपछि हाल महाराजगन्ज सरेका छन्।
भाइटीकाको दिन तीन छोरा र छोरीसँग शान्ता वैद्य। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
अद्वैत संस्थामा गुरू वन्दना पाठ गर्दै शान्ता वैद्य। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
परिवारसँग। तस्बिर: पारिवारिक संकलन
अहिलेसम्म प्रकाशित भएका हजुरआमाका कथा पढ्न क्लिक गर्नुहोस्ः
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ९, २०७६, १५:३०:००
ओलीमाथि राजनीतिक ‘कू’ को प्रयत्न!
एक व्यक्तिको अनुहार हेरेर संविधान संशोधन तयारी, यो के तमासा हो?: कांग्रेस
आफैंले छुट्टयाएको रकम किन खर्च गर्न सक्दैनन् अर्थमन्त्री?
कोरोनाले सहकर्मीको मृत्यु भएपछि काममा जान 'डराए' कोरियाका नेपाली
छाया मन्त्रीलाई कांग्रेसको निर्देशन- मन्त्रालयका भ्रष्टाचार गहिरोसँग खोज्नू
अब सूर्यविनायक–जडिबुटी खण्डमा निजी र सार्वजनिक सवारीको छुट्टाछुट्टै लेन
कोरोनाविरूद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन बसन्तपुरमा दीप प्रज्वलन (फोटोफिचर)
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट इरानमा छ को मृत्यु
तस्वीरमा हेर्नुस्, खोकना पर्यटन महोत्सव
जन्मने बित्तिकै रुनुको सट्टा रिसाइन् उनी!
ओलीमाथि राजनीतिक ‘कू’ को प्रयत्न! अमित ढकाल
आफैंले छुट्टयाएको रकम किन खर्च गर्न सक्दैनन् अर्थमन्त्री? मुराहरि पराजुली
पदभन्दा पहिले मान्छे बन्नुस् महोदय! यमुना अर्याल (काफ्ले)
सुका मोहर आम्दानी इच्छा आवश्यकता खानदानी! रेशा भट्टराई
क्यार्नी होस् धेरै पढेर हँ? सुशिला खनाल
भ्यालेनटाइन डेको ‘भूत’ सिन्धु गौतम पोखरेल
श्रीमतीको त्यो अन्तिम पत्र चेतना शर्मा
दोषी तुलो अर्जुनराज पन्त
सिउँदो देखाउँदैनन् बुर्काहरू साकारबाबु सुबेदी
‘रिसिबीका कारण झूटो उजुरी, नियोजित ढंगबाट समाचार लेखियो’ सेतोपाटी
शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र सुनिता ढकाल पौडेल
काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई खुला पत्र सुवास न्यौपाने
युनिकोडमा टाइप गर्नुहोस्
सेतोपाटी संचार प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५६१/०७४-७५
Setopati Sanchar Pvt. Ltd. Jhamsikhel Lalitpur, Nepal Email: info@setopati.com setopati@gmail.com Phone: +977-1-5529319 +977-1-5528194
015544598, 9801123339, 9851123339
Subscribe YouTube Channel
सेभेन डेज इन टिबेट
१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद
© Setopati Sanchar Pvt. Ltd. -2020 All rights reserved. Site by: SoftNEP